Voir l'Annonce mariage ma51053 sur Tonga Tena Rainikoto tokoa ianao. Izaho koa manahy be hoe i Rakirisy rencontre entre femmes marennes no ao ambadik 8767 i Sahondra. Efa tafaresaka tamin 8767 ilay vendrampoivre iny aho fa gaga ihany hoe mpitsara ve iny. Amin 8767 izay Ministra. Ary mitovy ny sitily sasany.